လင်းသန့်| November 2, 2012 | Hits:1
| | သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
38 Responses LeaveaReply Cancel reply
david November 2, 2012 - 7:41 pm ဇွန်လအရေးခင်းစတာလည်း အဲဒီ FACEBOOK ရဲ.ရေးသာလှုံ.ဆော်မှုပယောဂအများကြီးပါတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်။ သမတရုံးအဖွဲ.၀င်း
Reply Ko Ko Gyi November 2, 2012 - 7:43 pm ဦးဇော်ဌေး၏ “ပုဂ္ဂလိက အမြင် တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်” ဟု ပြောဆိုရေးသားသော်လည်း သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းထုတ်ပြန်ခြင်းကြောင့် သမ္မတရုံး နာမည်ပျက်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ “နောင်တခေတ်၏ အောင်စစ်သည်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာ သွေး စည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အမည်ခံ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားများ လက်နက်များဖြင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပြည်ပမှ ရိုဟင်ဂျာများ ၀င်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတပ်များမှ ကြိုတင်သတင်းရရှိထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချေမှုန်းနေပြီဟု ယူဆပါသည်” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထိ ယင်းသတင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း သမ္မတရုံးနှင့် အစိုးရက အတည်ပြုထုတ်ဖော်ခြင်း မရှိနိုင်ပေ။…Actually Hmu Zaw is successful in pulling ALL the citizens behind him, gov and Tatmadaw by INVOKING the Loyalty to the country to defend the armed invaders. Any one who opposed would becomeatraitor. He had given Ultra-Nationalistic spirit and hatred to Rohingyas and Muslims in Myanmar…If gov continue to keep him he and the gov could be made answerable at ICC for this HATE CRIME leading to Crimes Against Humanity and GENOCIDE.
Reply aung kyaw thu November 2, 2012 - 8:06 pm စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကတော့ တိုမြန်မာလူမျိုးတွေအကျင့်မကောင်းသေးတာပဲ သာသလိုနေမယ် သာသလိုစားမယ် အာဏာရှိရင် ရှိသလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ် အစိုးအတွင်းမှာဒီလို လူမျိုးတွေအများကြီးရှိနေတယ်
Reply Aye November 2, 2012 - 8:41 pm …. Aung zaw should know, it’s ko hmuu zaw personal Facebook…. No need to ask by phone…. Ko hmuu zaw also no need to delete it.. Any how, editor aung zaw nothing do for country… I won’t accept his article and news related with this…. Objection to u aung zaw….
Reply than htun November 2, 2012 - 8:55 pm ဧရာဝတီဟာ ခိုင်မာတဲ့သတင်းဌာနဖြစ်ပေမဲ့ အတိုက်အခံဘက်ကို အသာပေးရေးသားခဲ့တာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရမကောင်းကြောင်းကိုရေးပို့ရင် သတင်းက ခေါင်းကြီးကနေ ထိပ်ဆုံးက ပါလေ့ရှိတာကိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အစိုးရကို ပြောင်းလဲဖို့အော်နေတဲ့ဧရာဝတီသတင်းဌာနအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ယနေ့ထိ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးတာကိုမြင်နေရပါတယ်။
Reply swe htwe November 4, 2012 - 11:52 pm That’ s right. I am strongly agreed to you.
Reply Egermgpkg November 2, 2012 - 9:02 pm ရာထူးနှင့်မဆိုင်ပါ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်သဘောထားအမြင် ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိသင့်ပါသည်
Reply အန္ဒာအေးဝေ November 2, 2012 - 9:07 pm စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်တောင်ဒီမိုကရေစီရှိပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေဖန်ခွင်လိုချင်ပြီးတော့ဦမူးဇော်ကကောသမ္မတရုးံနဲ့မဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကိုသမ္မတ page မဟုတ်တဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်facebookမှာ တင်ခွင့်မရှိရဘူးလား။
Reply manson November 3, 2012 - 2:12 am I like Ur words
Reply Nay Myo November 2, 2012 - 9:27 pm အပိုတွေမပြောကြနဲ့ မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာ့ဆန်စားခဲ့ကြတာပဲ
Reply smiley November 5, 2012 - 10:05 am သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်
Reply Kyaw Win Myint November 2, 2012 - 9:44 pm မှူးဇော်က သူ့ Facebook မှာသူရေးချင်တာရေးမှာပေါ့။ ဒါက သမ္မတရုံးရဲ့ Official Page မှာမဟုတ်တာ။ မှန်တာ မှားတာ၊ လက်ခံတာ လက်မခံတာ စာဖတ်သူတွေဆုံးဖြတ်ပါစေ။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို တန်ဖိုးထားကြကြေးဆို လူတိုင်းလူတိုင်း မှန်တဲ့အတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးခွင့်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။
Reply ရဲဝင်း November 2, 2012 - 10:52 pm ဒီလို တုန့်ပြန်ရေးလိုက်တာက ဧရာဝတီသတင်းဌာနရှိ အယ်ဒီတာတို့မှ မိမိတို့၏ စိတ်ဓါတ်အရည်အချင်းနိမ့်ပါးရာ ကျကြောင်းပြသရာရောက်နေသည်မဟုတ်ပါလော? သတင်းဌာနတခုအား ပါတ်ဝန်းကျင်မှ ချီးမြှောက်ခြင်းလည်းရှိမည် ဆဲဆိုခံရခြင်းလည်းရှိမည်။ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာ ယခုကဲ့သို့ တုန့်ပြန်ရန်မလိုဟု ထင်ပါတယ်။ သတင်းနှင့် သတင်းဆက်စပ် ဆောင်းပါးများကိုသာဖတ်လိုပါတယ်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 3, 2012 - 2:33 am ထောက်ခံပါတယ်။ အပြည့်အ၀ မှန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်ပါ။
Reply kyawsoe November 3, 2012 - 12:11 am သတင်းသန့် သန့် လေးဘဲ ဖတ်ချင်တယ်
Reply THIHA TUN November 3, 2012 - 12:19 am I strongly support Irrawaddy’s response to him.Irrawaddy should not be submissive to his attack.If FB pages are his own opinions, why did he posted gov’s statements on his FB? Did he take any responsibility on his FB posts which reflected fabricated news and destructive propaganda ? He is taking advantages on credulous FB fans by the influence of his office. Shame on him.
Reply smiley November 5, 2012 - 10:08 am you’re right, as an official of high ranking in the top office of the government, he should not do like this.
Reply မင်းမဟာ November 3, 2012 - 12:26 am မင်းလားကွ! ရဲ့ နီလက်ရှိအေဒီတာ၊မင်းတို့ ကကောဘယ်တုန်းက၊စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နှင့်ညီခဲ့လို့ လဲ။တော်လှန်ရေးသမားယောင်ယောင်၊ဂီတာသမားယောင်ယောင်၊သတင်းသမားယောင်ယောင်၊မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းပြည်ကိုကုလားလက်ထဲရောင်းစားနေတာ။ပြောတော့တော်လှန်းသမားတဲ့။ရင်နာပါတယ်ကွာ။
Reply သစ္စာ November 3, 2012 - 1:46 am ဟရောင်ဇော်ဌေး သနားကြင်နာမှုမရှိတဲ့ကောင် အဲဒါနဲ့များလူကြီတက်လုပ်နေသေးတယ် မင်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြေလည်အောင်လုပ်ကမယ့်ဟာကိုအခုမင်းတို့ကသင့်မြတ်နေတယ့်ပြည်သူအချင်းချင်းကိုရန်တိုက်ပေးနေတာလားငါတို့သမ္မတကို့ချောက်မတွန်းပါနဲ့
Reply Maung Lwin November 3, 2012 - 2:58 am “Who care……..Irrawaddy?????????????????????????’
Reply Wai lin November 3, 2012 - 6:41 am လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
Reply thihamin November 3, 2012 - 6:44 am သေချာတာမှတ်ကြပေတော့ဗျာ။ ဒီကောင်နာမည်အရင်းက ဌေးဇော်တဲ့ဗျား။ ဇော်ဌေးဆိုတာ အဲဒီရောက်မှ ပြောင်းတာ။
Reply Myint Thu November 3, 2012 - 7:20 am Same same.He have to do it and i agree it.Do you think only your magazine can write whatever you think or your idea?Remember,he isanecessary man for our country.Again,time will answer who he is and who you are.
Reply ooaung November 3, 2012 - 7:40 am မှူးဇော် က အမှန်မရေးဘူးဆိုရင် ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲ၊ အမှန်ကိုသိမှ မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့၊ ရုံးအ
Reply ကိုရန် November 3, 2012 - 8:58 am မုဆလင်ဥပဒေ (sharia law) အပြင်ပတွင် အားလုံးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိကြသည်။
Reply === November 3, 2012 - 10:00 am မိမိရပ်တည်ချက် မည်သို့ဖြစ်သည်ကို မိမိဘာသာသိလျှင် ပြီးပါသည် ဦးဌေးဇော်။
Reply တပ် ချစ်သူ November 4, 2012 - 11:35 pm မှုးဇော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရေးသားခဲ့သည့် အချက်( ၁၁ )ချက်လုံးကို အပြည့်အဝ ခြွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံပါသည်။
Reply မောင်မှန် November 3, 2012 - 1:58 pm ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ သူများနိုင်ငံက ပေးတာစားနေတဲ့ သတင်းသမားကြီးများခင်ဗျာ
Reply ထွန်းထွန်း November 3, 2012 - 2:06 pm စာနယ်ဇင်ဆုိုတာ သူများကုို ဝေဘန်မယ် ငါ့ကုိုတုို့ပြန်မဝေဘန်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောလား။ မှုဇော် မှားခြင်း မှန်ခြင်းကုို မဆုိုလုို့။ ခုတလော စာနယ်ဇင်းများသည် သူများကုိုဝေဘန်သည်။ မိမိကုိုကျတော့ အဝေဘန်မခံနိုင်။ ဆတ်ဆတ်မထိမခံ။ ဒီမုိုကရေစီကုို နားမလည်တာ ဘယ်သူတွေလဲ။ သေချာလဲပြန်စဉ်းစားကြပါဦး။
Reply swe htwe November 6, 2012 - 4:31 pm That’s right. Irrawaddy didn’t express some of my comments. So irrawaddy has no freedom of press. He is under censorship funded by ?who. I think he may not express this comment.
Reply kohtet November 4, 2012 - 5:58 pm မှးူဇော်သဘောထားဆိုရင်သမ္မတရုံးနာမည်မတပ်ပါနဲ့မှးူဇော်(ငဖွကြီး)(နှစ်ဖက်ချွန်)ဆိုပြီးရေးပေါ့ ကွာသမ္မတရုံးနာမည်ပျက်တယ်မင်းလဲလွတ်လပ်စွာရေးသားနှိင် တယ်ငါတို့လဲလွတ်လပ်စွာဆဲနှိင်တယ်၊သတင်းတွေကိုလဲခဏဘဲတင်ပြီးပြန်ဖျက်ပစ်တယ်သတ္တိမရှိတဲ့ကောင်ပဲဒါကြောင့်မှူးဇော်(နှစ်ဖက်ချွန်)ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပိုလိုက်တယ်
Reply Toe Toe November 4, 2012 - 8:46 pm ဦးဇော်ဌေး၏ “ပုဂ္ဂလိက အမြင် တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်” ဟု ပြောဆိုရေးသားသော်လည်း သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းထုတ်ပြန်ခြင်းကြောင့် သမ္မတရုံး နာမည်ပျက်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ “နောင်တခေတ်၏ အောင်စစ်သည်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာ သွေး စည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အမည်ခံ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားများ လက်နက်များဖြင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပြည်ပမှ ရိုဟင်ဂျာများ ၀င်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတပ်များမှ ကြိုတင်သတင်းရရှိထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချေမှုန်းနေပြီဟု ယူဆပါသည်” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထိ ယင်းသတင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း သမ္မတရုံးနှင့် အစိုးရက အတည်ပြုထုတ်ဖော်ခြင်း မရှိနိုင်ပေ။
Reply TM November 5, 2012 - 1:06 am မှူးဇော်၇ဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘောထားဆို၇င် သူတဦးထဲကိုပဲ ခုံရုံးတင် စစ်ဆေးပါ။ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ဝင်လာသည်ကို သမ္မတကြီးသိပုံမ၇။ သူတယောက်တည်း သိပုံပေါ်၇သည်။ တော်ကြာ တကယ် ၀င်လာခဲ့လျှင် သမ္မတကြီး အေ၇းယူမှုနောက်ကြသောကြောင့် အပြစ်တင်ခြင်းခံ၇လိမ့်မည်။ တကယ်မဟုတ်ခဲ့လျှင်တော့ သူအား ၇ခိုင်အေ၇းလှုံဆော်မှုဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ယူသင့်သည်။ လူပေါင်း တစ်ယာကျော် သေဆုံးစေသော လှုံဆော်မှုသည် ပြစ်မှုအသေးစားမဟုတ်၍ ပေါ့ပေါ့တန်တန် မချန်ထားသင့်ဟုမြင်ပါသည်။
Reply သက်စု၇ီ November 5, 2012 - 6:54 pm မှူးဇော် သည် ၇ာထူး အ၇ှိန်ကို အသုံးချပီး ဘက်လိုက် မဟုတ်မမှန် လုက်ကြံေ၇းသားချက်များ သည် ၇ခိုင်အေ၇းကို ကြီးထွားစေခဲ့တာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး
Reply Nay Myo Aung November 5, 2012 - 11:53 am Facebook ဟာလူမှုရေးကွန်ယက်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံရေးကွန်ယက်မဟုတ်ပါ။Hmuu zaw အနေဖြင့်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသည်ဟုဘယ်တုန်းကပြောခဲ့ပါသလဲ။လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရှိပါတယ်။အပြုသဘောဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။အမြဲအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်နေရင်တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့နှေးပါလိမ့်မယ်။
Reply ဖေကံကောင်း November 7, 2012 - 9:17 pm ဒီမိုကရေစီဆို ခံစားချက်တွေမရေးရတော့ဘူးလား သူများအိမ်နံရံတွေမှာဆေးမှူတ်တာတောင်မျှောကပေးပြီးတော.
Reply moe July 20, 2013 - 2:01 am ကောင်းတယ်။
Reply moe July 21, 2013 - 7:03 am အမျိုးဘာသာ၊သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။